Jadwalka Khidmada Goobaha GAZİBİS iyo Macaamilada Macaamilka | RayHaber | Wadada Tareenka | Wadada weyn | cable baabuur
HomeTURKEYGobolka Waqooyi-galbeed ee Anatolia27 GaziantepJadwalka Ujrada Bixinta GAZİBİS iyo Macaamilada Macaamilka
07 / 11 / 2019 Levent Elmastaş 27 Gaziantep, Gobolka Waqooyi-galbeed ee Anatolia, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, TURKEY 0
lacag-bixinnada iyo macaamillada xubnaha
Dowlada Hoose ee Gaziantep, si kor loogu qaado isticmaalka bushkuleetiyada iyada oo loo adeegsado gaadiid iyo sidoo kale ujeeddooyinka madaddaalada iyo isboortiga; GAZİBİS waxay ujeedadeedu tahay inay ku faafiso Nidaamka Wadajirka ah ee Nidaamka Wadajirka ah ee Bisiklet Smart Baaskiil Gaziantep guud ahaan Gaziantep, sidaas darteedna ay ku siiso gaadiid caafimaad iyo jawi u wanaagsan dhammaanba kuwa jecel baaskiil.
Nidaamka Wadaagista Smart Bike, dadka jecel baaskiilku maheyn inay wataan baaskiilkooda, waxay ka kireysan karaan baaskiiladaha saldhigyada GAZİBİS waxayna u dhaafi karaan xarun kasta oo GAZİBİS.
Waa maxay Nidaamka Baaskiilka ee Smart?
Waa nidaam wadaagis baaskiil oo waara oo u adeegta qaab kale oo gaadiid loogu talagalay kuwa jecel baaskiilka magaalooyinka waaweyn, waxay baabi'ineysaa daruuriga qaadidda baaskiillada iyadoo lagu taageerayo keydka tikniyoolajiyada waxaana lagu dhexgelin karaa shabakadda gaadiidka ee magaalada.
Ujeedada nidaamkani waa in la hubiyo in masaafada dhaadheer ee 3 - 5 km la wadi karo iyadoon laga kaxayn baabuur. Sidan, culayska saaran gaadiidka dadweynaha iyo saameynta gaaska deegaanka ee waxyeelada u leh bey'adda ayaa la yareyn doonaa bulshada waxay fursad u heli doontaa inay adeegsato gaadiid caafimaad iyo jawi saaxiibtinimo badan oo gaadiid leh.
Sidee xubin looga noqdaa Nidaamka GAZİBİS?
Kalealti, Garoonka, 15 Luulyo, Manoglu Park (SankoPark), Masal Park, Wonderland iyo Ga Xn 7 saldhig oo lagu rakibay nidaamka baaskiilka 108, kaas oo laga soo qaadan karo dhammaan Goobaha iibinta Kaarka Gaziantep Gaziantep Kaarka buuxa, oo ku yaal Balikli (gadaasha Masjidka Omeriye) Gaziantep Card Personalization Waxaa loo isticmaalaa kaararka dhimis iyo kaararka deynta. Laguma aqbali karo Kaararka Bilaashka ah. Xaddiga saacadlaha ah waxaa lagu dallacaa sida 1 TL.
Haddii aad mar hore xubin ka ahayd nidaamka Gazibis, xubinnimadaada waad ku wareejin kartaa Kaarka Gaziantep. Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad iska diiwaangeliso nidaamkaaga Gazibis kaarkaaga Gaziantep adigoo u maraya foomka internetka oo aad ku buuxin karto daqiiqadaha 5.
Muddada xubinnimada, macluumaadka shaqsiga ah ayaa la helayaa heshiiskana la saxeexay. Macluumaadka ku saabsan faahfaahintaan waxaa laga heli karaa kumbuyuutarka kiosk iyo waliba saldhigyada leh sumadaha macluumaadka.
Oggolaanshaha furan ee 25 TL waxaa laga abuuray kaararka deynta ee lagu iibsado iyadoo la adeegsanayo Kaarka amaahda, iyo ka dib soo noqoshada baaskiilka, ka dib marka la gooyo khidmadda isticmaalka, qadarka harsan ee soo haray waxaa la joojinayaa habraaca uu go'aamiyay bangiga. Kaararka amaahdu waa inuu u furnaadaa wax iibsashada gaarka ah.
Saldhigga baaskiilka ee 7 waxaa kormeeraya guud ahaan kaamirooyinka internetka ee 15. Maamulka iyo dayactirka baaskiillada 108 waxaa fuliya Gaziulaş.
Baaskiillada laga qaado xarun kasta waxaa lagu tagi karaa saldhigyo kale. Baaskiiladaha 3 waxaa lagu kireysan karaa kaarka amaahda oo kaliya 1 waxaa lagu kireysan karaa Kaarkaan Gap Card. Xilliga soo noqoshada ka dib iibsiga baaskiilku wuxuu ku xaddidan yahay saacadaha 24. Xaalada 24-ka-bixista, dacwadaha dambiilaha ayaa la bilaabi doonaa tan iyo markii la tixgeliyo isku dayga suuxdinta, oo lagu daray heshiiska.
FIIRO GAAR AH: Adeegga xubinnimada ee foomka internetka wuxuu shaqeynayaa oo keliya kuwa ka diiwaan gashan Gaziantep. Kuwa ka diiwaangashan magaalooyinka kale waa inay yimaadaan Gaziantep Card Central Branch oo ay xubin ka noqdaan Kaarkaan Gap. Isdiiwaangalinta Xarunta Baadhitaanka Kaadhka Gaziantep waa bilaash, waa ku filan tahay inaad haysato kaarkaaga aqoonsiga iyo Kaarka Gazantep Haddii aadan haysan Kaarka Gaziantep weli, waa suurtogal inaad ka hesho Xarunta Gawaarida Kaarka ee Gaziantep lacag ahaan.
Xubinnimada GAZIBIS oo wata Kaarka Gaziantep
Gazibis wuxuu hadda ku jiraa nidaamka kaararka Gaziantep. Waad isticmaali kartaa Kaarkaaga Gaziantep (marka laga reebo noocyada kaararka bilaashka ah / bilaashka ah) ee aad u isticmaasho baska, taraamka iyo meelaha laga soo galo ee loogu talagalay kireysiga bushkuleetiyada Gazibis.
Haddii aad mar hore xubin ka ahayd nidaamka Gazibis, xubinnimadaada waad ku wareejin kartaa Kaarka Gaziantep. Waxa kaliya oo ay tahay inaad sameyso waa inaad iska diiwaangeliso nidaamkaaga Gazibis kaarkaaga Gaziantep adigoo u maraya foomka internetka oo aad ku buuxin karto daqiiqadaha 5. Waxaad hadda ka bilaabi kartaa xulashooyinka soo socda.
Haddii aad wax su'aalo ah ka qabtid taleefanka '0342 329 45 45 0533' iyo 784 27 27 XNUMX waxaad ka heli kartaa taageero deg deg ah khadadka WhatsApp.
FIIRO GAAR AH: Adeegga xubinnimada ee foomka internetka wuxuu shaqeynayaa oo keliya kuwa haysta diiwaangelinta degenaanshaha ee Gaziantep. Kuwa ku nool magaalooyin kale waxaa looga baahan yahay inay yimaadaan Gaziantep Card Central Branch oo ay xubin ka noqdaan Gaziantep Card. Isdiiwaangalinta Xarunta Baadhitaanka Kaadhka Gaziantep waa bilaash, waa ku filan tahay inaad haysato kaarkaaga aqoonsiga iyo Kaarka Gazantep Haddii aadan haysan Kaarka Gaziantep weli, waa suurtogal inaad ka hesho Xarunta Gawaarida Kaarka ee Gaziantep lacag ahaan.
GAZİBİS Sidee loo kireystaa?
Sida loo Iibsado Baaskiil wata Kaarka Gaziantep ee ka socda GAZİBİS Station
1. STEP:Nooca Xulashada Nooca ah: Guji Al Buy Baaskiilka "badhanka.
2. STEP : Dhimis Gaziantep ama Kaarka buuxa AKHRISKA KAARKA aag. Hawshani waxay qaadataa ilaa 5 sekan.
TALLAABADA 3:Gali lambarka sirta ah ee Gaziantep Card. (Eraygan sirta ah waxaa loo diray moobaylkaaga inta lagu gudajiray diiwaangelinta khadka.
TALLAABADA 4:Haddii kaarkaagu uusan xirneyn oo aad leedahay isku-dheelitir kugu filan (ugu yaraan 5 tl) nidaamka ayaa kuu qoondeyn doona baaskiil. Waxaad ka arki kartaa lambarka baaskiilka shaashadda. Nidaamka ayaa dooranaya baaskiilka laftiisa.
TALLAABADA 5:Waxaad ka qaadan kartaa baaskiilka lambarka lagu muujiyey muujinta adoo kor uga qaadaya furitaanka qufulka gudahooda 20 sekan. Nalalka LED-ka casaanka ee qufulka waa iney noqdaan cagaar. Haddii 20 aan lagu helin ilbidhiqsiyo, nidaamka ayaa xiran doona. Xaaladdan oo kale, ku celi hannaanka. Ujro dheeri ah ma laha.
TALLAABADA 6:Hubi xasilloonida baaskiil gudahooda 60 ilbiriqsi ka dib markaad qaadatay. Haddii aysan dhibaato jirin waxaad bilaabi kartaa inaad isticmaasho. Fadlan soo celi haddii ay jiraan cilad. 60 waa lacag la aan (Fadlan calaamadee bushkuleetiga aad rabto inaad iibsato marka hore.)
XUSUUS: Waxa kale oo aad ku samayn kartaa talaabooyinka kore adoo badhan 'KU SAMEE BADAN XULASHADA BICYCLE'.
MARKA AQBARASHADA; Dhamaadka qalliinka, ka dib markii macluumaadka hawlgalka lagu guuleysto lagu muujiyo shaashadda, u tag baaskiilka aad cayimay oo baaskiil ka qaad santuuqa. Kaliya 1 (hal) baaskiil ayaa lagu iibsan karaa kaarka xubinnimada.
Sida loo Iibsado Baaskiil wata Kaarka Amaahda ee laga helo Xarunta GAZİBİS?
Waxaan 1.A:Xulashada Nooca Nooca ah: Taabo "Badso Kaarka Deynta" Button.
2. TALLAABADA:Gali lambarka taleefankaaga shaashadda taabashada badhanka xaqiijinta.
3. TALLAABADA:Gali macluumaadka gelitaanka kaarka deynta iyo tirada baaskiillada aad rabto inaad ka kireyso shaashadda, oo taabo badhanka Confirm.
4. TALLAABADA:Gali nambarka xaqiijinta ee loo diro taleefankaaga SMS oo dhagsii badhanka xaqiijinta.
5. TALLAABADA:Gali nambarka baaskiilka aad rabto inaad kireysato oo riix batoonka xaqiijinta.
6. TALLAABADA:Kadib markii macluumaadka macaamil ganacsi ee guuleysta ay ka soo muuqdaan shaashadda, u tag baaskiillada aad cayimay oo ka qaad baaskiilka santuuqa gudaha 20 sekan. Nalalka LED-ka casaanka ee qufulka waa iney noqdaan cagaar. Haddii 20 aan lagu helin ilbidhiqsiyo, nidaamka ayaa xiran doona. Xaaladdan oo kale, ku celi hannaanka. Ujro dheeri ah ma laha.
Sida loogu soo celiyo Baaskiilka Goobaha GAZİBİS
TALLAABADA 1:Dhig baaskiilka aad isticmaaleyso mid ka mid ah meelaha qufulka madhan. Saldhigga ama meesha qufulku way kala duwanaan karaan.
TALLAABADA 2:Ka dib markii la galiyo, sug qiyaastii 5 ilbiriqsi oo arag in Nalka meesha qufulku casaan yahay.
TALLAABADA 3:Hubso in baaskiilku qufulan yahay adiga oo kor u qaadaya wax yar. Hadeysan baaskiilku xirmin, iskuday meel kale oo quful.
TALLAABADA 4:Markaad xirto bushkuleetiga, fadlan riix badhanka "BICYCLE DROP" si aad baaskiilkaaga uga dajiso Kaarkaaga Gaziantep.
(Haddii aad wax ku iibsatay kaarka amaahda, waxaad ku heli doontaa farriin qoraal ah taleefankaaga mobiilka inkasta oo baaskiil la sii daayay. Uma baahnid inaad adeegsato badhanka "BICYCLE DROP").
TALLAABADA 5:Akhriso Kaarkaaga Gaziantep Kaaliyaha. Tani waxay qaadan kartaa ilaa iyo ilaa 15 ilbidhiqsiyo ah, ha kaadhka kaadhkaaga ka bixin kana tag saldhiga kahor intuusan dhammaan. Macaamilkan looma baahna haddii lagu helo kaarka amaahda.)
XUSUUS: Baaskiil cusub lama iibsan karo ilaa nidaamka baaskiilku soo dhammaado mooyee !!! Soo laabashada ka dib Xitaa haddii kaarka aan la aqrin, nidaamku wuxuu go'aamiyaa lacagta iyadoo loo eegayo waqtiga baaskiilka lagu soo celiyay qufulka. Waqti dheeri ah laguma darin.
Haddii dhibaato ka haysato baaskiilkaaga
TALLAABADA 1:Haddii baaskiilku muujiyo wax dhibaato ah, ku noqo baaskiilku meel kasta oo bannaan ee xarunta gudahiisa hal daqiiqo (1). Ujro la'aan.
TALLAABADA 3:Hubso in baaskiilku qufulan yahay adiga oo kor u qaadaya wax yar.
TALLAABADA 4:Si aad mar labaad u soo iibsatid baaskiil, mar kale ku wareeji kaarkaaga oo aad qaadatid baaskiil kale lambarrada ku qoran shaashadda.
TALLAABADA 5:Kadib markaad hubiso baaskiilkaaga, waad ka bixi kartaa saldhiga.
Fadlan, hubi baaskiilka aad rabto inaad iibsato marka hore !!!
Ku wareejin bilaash ah GAZIBIS
Kaarkaaga ugu horeeya ee loogu talagalay basaska degmada iyo taraamyada ay maamusho Gaziulaş waa lacag la'aan saacadda ugu horeysa ka dib kiraysigaaga baaskiilka adoo isticmaalaya Kaarkaaga Gaziantep. Si kale haddii loo dhigo, markaad qayb ka mid ah safarkaaga ku qaadatid baaskiil qaybna aad ku safarto gaadiidka dadweynaha, waxaad bixinaysaa oo keliya baaskiilka.
Saldhigga Sankopark Gazibis
Saldhigga Kalealtı Gazibis
Saldhig Gazibis Station
Goobta Wonderland Gazibis Station
Xarunta Gazibis Station
Demoqraadiyadda Gazibis Station
Si aad uhesho khariidada Gazibis halkan Riix halkan!
Goobaha SAKBİS, Jadwalka khidmada iyo Macaamil Macaamilada
Saldhigyada KAYBİS, Jadwalka khidmadda iyo Macaamil Macaamilada
Nextbike Konya Xarumo Baaskiil oo Casri ah…
Jadwalka khidmadda Khadka BISIM iyo Howlaha Xubnaha
Jadwalka khidmadaha ANTBIS iyo Macaamilada Macaamil